* * * i-beachfront Blue Bay - Villa Kolibri * * * - I-Airbnb
* * * i-beachfront Blue Bay - Villa Kolibri * * *
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Xavier
I-Villa Kolibri yethu ethokomele kakhulu (i-Villa 4 ebalazweni) itholakala EBANGENI ELINGAMAMITHA angu-75 KUPHELA ukusuka e-Blue Bay Beach enhle ene-bar nendawo yokudlela enhle! I-Blue Bay Resort yaziwa kakhulu ngenkundla yayo yegalofu edumile nemisebenzi emihle kakhulu yokutshuza nokutshuza emanzini.
Kuyo yonke i-villa ye-Blue Bay Village, i-Villa Kolibri (i-Villa 4) cishe iseduze kakhulu nebhishi namabha, indawo yokudlela kanye nesitolo sayo sokutshuza. Kungamamamitha angu-75 kuphela ukuya ogwini lwase-Blue Bay olwandle oluhle oluhlaza okwesibhakabhaka!
I-clubhouse yendawo yokudlala igalofu nendawo yokudlela ye- ‘Lemongrass‘ kanye nezinkantolo zethenisi nazo zingaphansi kwebanga lokuhanjwa ngezinyawo.
I-villa yethu ikhathaza isitezi esiphansi se-villa enamapulangwe amabili. La ma-villa anesitezi esisodwa alungele imindeni enezingane. Isihlalo esiphakeme kanye nephakethe nokudlala kuyatholakala mahhala ku-villa Kolibri!
I-villa enefenisha ethokomele itholakala engadini enezihlahla eziningi ye-Blue Bay Village. Phakathi nale "ndawo eshisayo" uzothola indawo yokubhukuda yomphakathi enendawo yokubhukuda yezingane ehlukile.
Le villa yabantu abangu-6 inakho konke okudingekayo:
> i-wifi esheshayo yamahhala nomabonakude nge-Apple TV ne-Netflix!
> Amagumbi okulala angu-3, amagumbi okugezela angu-2 nendlu yangasese yesivakashi
> kunekhishi elivulekile eliphelele elihlanganisa umshini wokugeza izitsha, uhhavini we-combi, umshini wekhofi ovamile, i-toaster ne-blender
> igumbi lokuphumula elinophahla kodwa alikho
i-airco > umpheme omkhulu onamafeni angu-3 kasilingi
> ama-air conditioner namafeni kasilingi kuwo wonke amakamelo okulala
> Amathawula okugeza angu-2 kanye nethawula lasebhishi elingu-1 umuntu ngamunye
> umshini wethu wokuwasha ukhululekile ukuwusebenzisa
> iphakethe nokudlala nesihlalo esiphakeme kuyatholakala mahhala
> Ukusetshenziswa kwamahhala kwemibhede yasebhishi ne-palapas ogwini
> i-Blue Bay Golf ephephile
inikeza indawo yokudlala igalofu engu-18-hole par 72 enokubukeka okuhle koLwandle lwe-Caribbean kanye nezitshalo ezihlukahlukene zasenkabazwe eceleni kwendlela efanele. Kufanele ngisho unqamule ulwandle phakathi kwesayithi yokuphuma kanye nomgodi oluhlaza 5!
I-Blue Bay Dive inikeza amasayithi amabili ahlukile okutshuza, 'Udonga' kanye 'Nengadi'. Esikoleni sokutshuza esiqinisekisiwe se-PADI ungalandela inkambo noma uqashise imishini yakho. Ukusuka ebhishi ungahamba ngqo oLwandle lwe-Caribbean bese ubhukuda ngasogwini uye ezindaweni zokutshuza. Qaphela: ukubhukuda nge-snorkel nakho kuhle kakhulu e-Blue Bay!
Njengomnikazi oziqhenyayo we-Villa Kolibri ngiye ngakujabulela ukuphathwa kwe-villa yami enhle kubaphathi bami u-Wil no-Britta. Banakekela ukungena nokuphuma kwezivakashi, futhi bayindawo yokuxhumana phakathi nokuhlala kwakho. U-Wil no-Britta bahlezi betholakala ukuze bathole imininingwane.
Njengomnikazi oziqhenyayo we-Villa Kolibri ngiye ngakujabulela ukuphathwa kwe-villa yami enhle kubaphathi bami u-Wil no-Britta. Banakekela ukungena nokuphuma kwezivakashi, futhi b…